04 | November | 2008 | Myanmar Mp3 Album
၀၁။ နေပျော်ပျော် သေပျော်ပျော် – NO ၀၂။ ချစ်သူ – ဆုန်သင်းပါရ် ၀၃။ ကောင်ကလေး – သံသာဝင်း ၀၄။ ခုံတန်းလေး – ရှင်ဖုန်း ၀၅။ မင်းအလိုကျ – အားမူ ၀၆။ ဒီအချိန်ကစ – နွဲ့ယဉ်ဝင်း ၀၇။ အောက်စီဂျင် – ဇမ်နူး ၀၈။ အချစ်ကိစ္စ – နော်လီဇာ ၀၉။ ၂၂၃၅၉၅ – မီကီကိုး ၁၀။ ရင်ခုန်သံအရိုင်းလေး – ကာကာ ၁၁။ အချစ်သာယူလာပါ – မမ ၁၂။ နေရာတကာ – သီရိကိုကို
November 4, 2008 ME *MMA* နွဲ့ယဉ်ဝင်း အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ရှင်ဖုန်း ကာကာ မစ်ကီကိုးလ် မမ သံသာဝင်း Myanmar Artist No
ကျော်ထွဋ်ဆွေ (Sample 2)
***မိန်းကလေးများ နားထောင်ရန်မသင့်ပါ*** ၁။ Underground လောက ၂။ Rapper ပေါက်စ (Skit) ၃။ အချစ်သီချင်း (New Skool) ၄။ V.I.Princess (Feat. သားကြီး) ၅။ ဘိုရူး (Skit) ၇။ ကျိုက္က္ကဆံရပ်ကွက် (Feat. ဇေရဲ) ၉။ Welcome to 65 (Feat. J-Me, လင်းပင်ဟိန်း) ၁၀။ ရှေ့ဆက်ရန်မရှိ ၁၁။ Come back to me (Feat. လင်းပင်ဟိန်း) To be continued…..
November 4, 2008 Mad Computerist အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ကျော်ထွဋ်ဆွေ လင်းပင်ဟိန်း J-Me Myanmar Artist Unreleased Albums 24 Comments
November 4, 2008 mmsong MTV Jonas Brothers Love Bug2Comments
November 4, 2008 mmsong AC/DC International Artist New International Albums AC/DC ACDC Leaveacomment
Released Date: October 6, 2008
November 4, 2008 mmsong International Artist New International Albums Oasis Oasis3Comments
ဘိုဘို – ၀င်ရိုးတန်းအိပ်မက်
၁။ အဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ ၂။ လွမ်းဆွတ်ခြင်းဒဏ်ရာ ၃။ တစ်ခါက Rock N Roll ၄။ မသိလမ်း ၅။ အန္တရယ် ၆။ ဖြတ်သန်းခြင်း ၇။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆွဲအားများ ၈။ အသက်မဲ့ခြင်း ၉။ ပေးလို့ရတဲဒုက္ခ ၁၀။ ဆုံးရူံးခြင်းသီချင်း ၁၁။ နောက်ဆုံးည ၁၂။ အိမ်ပြန်နောက်ကျခဲ့ပြီလား
November 4, 2008 mmsong ဘိုဘို အခွေ (တကိုယ်တော်) Myanmar Artist 1 Comment